माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजना निर्माण बन्द
लमजुङ । लमजुङस्थित दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजनाको निर्माण बन्द भएको छ । लिबर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धित उक्त आयोजनामा कार्यरत २७ कर्मचारीमा मंगलवार साँझ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बुधवारदेखि आयोजनाको निर्माण बन्द गरिएको हो ।
आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएकाले जोखिम र कामदारको अभावले आयोजनाको निर्माण बन्द गरिएको आयोजनाका राजेन्द्र वस्तीले बताए । आयोजनाको अधिकांश निर्माण सम्पन्न भई विद्युत्गृहको काम बाँकी छ । हालसम्म ९८ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको र आगामी मङ्सिरदेखि उत्पादन थाल्ने तयारी भए पनि कोभिड–१९ ले प्रभाव पार्ने देखिएको आयोजनाले बताएको छ ।
आयोजनाको काम २०७१ सालदेखि शुरू गरिएको थियो । विसं २०७४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी र गत भदौमा आएको बाढीका कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाले बताएको छ । सम्झौतानुसार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय गत चैत ३० गतेसम्म थियो ।
निर्माण लम्बिँदा लागत रू. ६७ करोड ६० लाख बढी लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ । शुरूमा रू. ३ अर्ब ९६ करोड लगानीमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि बढेर हाल रू. ४ अर्ब ६३ करोड ६० लाख लाग्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रू. १८ करोड ५४ लाख लाग्ने कम्पनीले बताएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १३ करोड ६७ लाख ८४ हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको बाँधस्थल लोदो खोलाबाट २ हजार ७०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ र त्यति नै लामो पेनस्टक पाइपमार्फत दोर्दी खोलाको पानीलाई विद्युत्गृहमा झारिनेछ ।
आयोजनामा १२ दशमलव ५ का दुईओटा गरी २५ मेगावाटको बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । आयोजनाको बिजुली हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तथा वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा हुनेगरी प्रवद्र्धक कम्पनी लिबर्टी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । रासस